Sunday March 24, 2019 - 20:49:35 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Boqolaal katirsan maleeshiyaadka dowladda Federaalka ayaa maanta gadood ka sameeyay Baraawe waxayna xireen waddooyinka waaweyn ee magaalada arrinkaas oo saameyn ku yeeshay dhaq dhaqaaqa ganacsiga iyo isku socodka dadweynaha.
Saraakiil u hadlay maleeshiyaadka Dowladda ee Baraawe ayaa ku hanjabay in ay faarujin doonaan saldhigyada ay ku leeyihiin magaalada iyo deegaannada hoos yimaad haddii aan lasiin lacago mushaar ah oo ka maqan muddo Afar Bilood ah.
Maleeshiyaadka Dowladda Federaalka ee ciidamada Uganda ku wehliya duullaanka Sh/Hoose ayaa dhammaantood ka sheeganaya mushaar la'aan waxaana suurtagal ah in ay faarujiyaan degmooyinka iyo deegaannada ay ku suganyihiin.
Arrintan ayaa fadeexad ku ah Farmaajo oo laba sanadood ka hor markii uu utartamayay xilka madaxweynaha dowladda Federaalka ballan qaaday in askari walba uu siin doono mushaar waxaana muuqata in ballanqaadkaas uu ku biiray ballanqaadyo dhowr ah oo waxba kama jiraan noqday.
Isbuucii lasoo dhaafay ayay inta badan ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka Sh/dhexe waxay sameeyeen gadood iyagoo wali ka cabanaya mushaar la'aan.